Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa dalka Kenya oo ku soo noqday Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa dalka Kenya oo ku soo noqday Muqdisho
Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa dalka Kenya oo ku soo noqday Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa Khamiista maanta magaalada Muqdisho soo gaaray Muwaadiniin Soomaaliyeed oo maalmihii lasoo dhaafay ku xayirnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kadib markii duulimaadyadda Soomaaliya iyo Kenya la joojiyay.
Waxay tiradooda aheyd muwaadiniintan Soomaaliyeed ee maanta dib ugu soo laabtay dalkooda hooyo 114 muwaadin.
Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa fududeysay imaanshaha muwaadiniinta Soomaaliyeed, kadib markii maalmihii dambe ay iska diiwaang-eliyeen xarunta Safaaradda ay ku leedahay Nairobi.
Diyaarad ayaa kasoo qaadey magaalada Nairobi, islamarkaana keentay Caasimadda Muqdisho.
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ku soo dhaweeyay Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International ee Muqdisho.
Dowladda Soomaliya ayaanan wali si rasmi ah u shaacin xilliga la furaayo duulimaadyada gudaha iyo dibadda oo loo xiray sababo ku aadan cudurka safmareenka ee Coronavirus.